Igumbi elikhulu, elithokomele eduze kwase-Alanus University - I-Airbnb
Igumbi elikhulu, elithokomele eduze kwase-Alanus University
Bornheim, Nordrhein-Westfalen, i-Germany
Igumbi elikhulu elithokomele phansi. Ukuphakama okuthulile ezindaweni eziphansi eduze kwase-Alfter kanye neNyuvesi yase-Alanus. Imizuzu eyi-15 kuphela ukuya eBonn nemizuzu engama-30 ukuya e-Cologne (ukuxhumana kwethilamu kanye nezitimela edolobhaneni). Indawo yokuzijabulisa e-Nice (Kottenforst) endaweni eseduze.
Igumbi likhulu futhi lithokomele, linombhede wabantu ababili, isihlalo esinethezekile, itafula nesitulo kanye nekhabethe.Igumbi lokugezela elineshawa liwuhhafu wesitezi phezulu. Uma igumbi lesibili le-Airbnb ligcwele, uzohlanganyela negumbi lokugezela nesinye isivakashi.
4.91 · 57 okushiwo abanye
Sihlala e-Roisdorf, isifunda sase-Bornheim esisemngceleni we-Alfter. Kungaba yikhilomitha elilodwa ukuya ezitolo eziseduze e-Alfter noma e-Roisdorf. Ngemuva kwendlu ungathatha uhambo oluhle futhi ungafika ngokushesha e-Kottenforst.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bornheim namaphethelo